Ezona ncwadana zintle zokuhlekisa
Ukuphononongwa kweenoveli ezihlekisayo
UNkosazana Merkel. Ityala lika chancellor othathe umhlala phantsi
Awusoze wazi ngale minyango ijikelezayo kwabo bashiya ezopolitiko. ESpain kuhlala kwenzeka ukuba abongameli bangaphambili, abaphathiswa bangaphambili kunye nelinye iqela leenkokheli ezithathe umhlala-phantsi baphele bekwiiofisi ezingalindelekanga kwiinkampani ezinkulu. Kodwa iJamani yahluke mpela. Pha …
Impindezelo emnandi, nguJonas Jonasson
Yintsalela. Uburharha. Kwaye uJonas Jonasson uyazi kakhulu ngalo nto. Umbono wakhe weendawo ezihlekisayo umbeka kwiindawo ezichasene noncwadi lweSweden ngokukodwa kunye neNordic ngokubanzi. Kwaye ukusebenza njengendawo yokulwa, ukuhamba ngokuchaseneyo okwangoku nako kunomvuzo ngamanye amaxesha ... Kule ...
Abahlobo ngonaphakade, nguDaniel Ruiz García
Crapulas ngesiquphe. Isiphumo esiqhelekileyo phakathi kukaMnu Hyde noDorian Grey sokuba nabani na ongaphezulu kweminyaka engama-40 ubudala angabandezeleka xa ebuyela kubuhle obunxilisayo bobusuku emva kokuphosa iminyaka embalwa yokukhulisa abantwana, izinto zokuzonwabisa zangeCawa ezingazange zikrokrelwe ngaphambi kokufikelela ...
Usuku ebomini bukaThixo, nguMartín Caparrós
Kwezi ntsuku zisixhenxe athe uThixo wadala ngazo umhlaba, bendizakuhlala naleyo yenziwe ngumenzi wethu engceni ukuze acamngce ngomsebenzi. Ndicinga ukuba ibingathi sisibetho ngoMgqibelo okanye ngeCawe, andisakhumbuli. Baza kuyichaza apha ... Kodwa bayinto enye ...
Indoda eyayinguSherlock Holmes, ukusuka eMaximum Prairie
Umbhali odumileyo (nakwimizuzu yakhe efileyo yomdlali wepiyano) uJoseph Gelinek ubuya kwakhona kwinkulungwane yeshumi elinesithoba kwaye ngeli xesha usebenzisa igama lakhe elinguMaximo Pradera ukusinika inoveli malunga nokwahlukana kobuntu kunye nezo zinto ziphambeneyo apho, umzekelo. ..
Yaphula ibhokisi. Ezona ncwadi zihlekisayo
Ukuba ngelo xesha sithe saphawula ukuba uhlobo oloyikisayo lumalunga nento enje ngabantu njengoloyiko, xa sijongana nomcimbi woncwadi oluhlekisayo sikwanxibelelana neempembelelo zeemvakalelo. ISIQULATHO Wilt, nguTom Sharpe iyelenqe lezidenge, nguJohn Kennedy Toole A ...
Iklabhu yoLwaphulo-mthetho ngoLwesine, nguRichard Osman
Akusoloko kulula ukufunda inoveli ehlekisayo. Kungenxa yokuba abantu bacinga ukuba umntu ofunda incwadi uyangena kwizincoko ezinobukroti okanye ubambelele kuxinzelelo lwenoveli yosuku. Ke ukuhleka xa ufunda ngokukhawuleza kukumema ukuba ucinge ngomntu othile ...
Ukufa ngoNombombiya, nguAndrei Kurkov
Ukuphuphuma kwengcinga ka-Andrei Kurkov, umbhali wabantwana beencwadi, uyabaleka kule noveli, nangona abantu abadala, ngokungathandabuzekiyo befihliwe njenge-lysergic surrealism emelene nomntwana. Emazantsi ezantsi, uhambo oluya kwintsomi yabantwana lunengqondo ephantsi efanayo nokuhlangana kukaViktor ne ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha4 Elandelayo →